यसरी घरेलु विधिद्वारा घटाउनुस् पेटको बोसो
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्ययसरी घरेलु विधिद्वारा घटाउनुस् पेटको बोसो
पछिल्लो समय अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण मानिसहरू पेटमा बोसो भरिएर हैरान भएका छन् । बोसोयुक्त लम्बोदर भूँडी अस्वस्थ जीवनशैली तथा गलत खानपान व्यवहारबाट सिर्जित खराब उपहार हो ।
बोसो जमेको ठूलो भुँडीले केवल तपाइँको छविमा आँच पूराउने मात्र हैन विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्याको जोखिम समेत बढाउँछ । भुँडी घटाउने सरल घरेलु उपाय निम्न छन् ।
२. फाइबरको सेवन गर्नुहोस्
३. खैरो चामलको भात खानुहोस्
यदि तपाईं भात खानमा सोखिन हुनुहुन्छ भने सेतो चामलबाट टाढा रहनुहोस्, त्यसको स्थानमा खैरो चामलको भात खानुहोस् । यसका अलावा आफ्नो खानामा ब्राउन ब्रेड, ओट्सजस्ता खाद्य पदार्थ सामेल गर्नुहोस् । (खैरो चामलको भात भने नेपालको सन्दर्भमा त्यति सम्भव नहोला )
४. जुसको साटो फलफूल खानुहोस्
५. गुलियोबाट टाढा रहनुहोस्
६. पानी धेरै पिउनुहोस्
पेटको बोसो कम गर्न धेरै पानी पिउनुहोस् । यो निकै लाभदायीक हुनेछ । नियमित अन्तरालमा पानी पिउनाले मेटाबोलिजम बढ्छ र शरीरबाट विषालु पदार्थ बाहिर निस्कनमा मद्दत गर्छ । यसबाट शरीर स्वस्थ रहन्छ ।
७. एरोबिक व्यायाम गर्नुहोस्
८. काँचो लसुन खानुहोस्
९. तनाव कम गर्नुहोस्
११. धेरै सागसब्जी खानुहोस्
१२. खाना पकाउने तरिका परिवर्तन गर्नुहोस्
१३. बदामको प्रयोग गर्नुहोस्
बदाममा भिटामिन(इ तथा प्रोटिनका अलावा फाइबरको मात्रा अधिक मात्रामा हुन्छ । यसको सेवनले पेट लामोसमयसम्म भरिएको अनुभूति हुन्छ । यसमा क्यालोरीको मात्रा बढी भएपनि मोटाई भने बढाउँदैंन ।
१४. मांसाहारबाट टाढै रहनुहोस्